1164 NO MBOLA TSABOINA
36 ny sitrana vaovao omaly, ka 08 Antananarivo, 03 Fianarantsoa, 04 Mahajanga tany Sofia, 20 Antsiranana ka 05 Faritra SAVA, 15 Faritra Diana, 01 Toliara tany Tolagnaro Faritra Anosy. 14 682 no sitrana hatrizay manome taha 91,34%. Miisa 1164 kosa ny mbola tsaboina, izay manome taha 7,24%. Nihena 6 ny marary mafy, ka 20 izay amin’izao. Ny 14 eto Analamanga, 05 Matsiatra Ambony (Fianarantsoa), ary 01 Atsimo Andrefana (Toliara).